Aqoondarri dhanka macluumaadka xirfadda ee makhaayadleyda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Athena Papachristopoulos, Kristina Engström och Giovanna Sanchez - kor-meereyaal maareeynta cuntada ee xaafadda Järfälla. Sawirle: Kenadid Mohamed
Aqoondarri dhanka macluumaadka xirfadda ee makhaayadleyda
Waxaa wanaagsan in aqoon kororsi la helo marka hore
La daabacay fredag 28 juni 2013 kl 19.21
Dhabbooyinka loo maro nidaamka furashada ka howl-galka guud ahaan goobaha lagu macaamilo cunnada, qaasatan maqaayadaha ayaa ka duwan midkii ey soomaalidu horay u taqiin ee ka jiray dalkoodii, kolka loo barbar-dhigo Iswiidhen. Sida ay noo sheegtay Jawaahir Shanle oo dhowaantan maqaayaddii ugu horeeysay ee lagu iibiyo cunnada soomaalida ka furtay magaalada Malmö ee nawaaxiga gobolka Skåne:
Hase yeeshee amuurta ay Jawaahir ka hadleeyso oo la xiriirta dhanka qaabka dhismeed, ayaa dhanka kale waxaa jira in loo baahan yahay heer aqooneed uu shakhsiga maqaayadda furanaya u baahan yahay inuu aqoonin u leeyahay habka nadaafadda iyo xeerarka ka degsan, sida ay noo sheegtay Giovanna Sanchez oo ka mid ah saddexda kormeera ee goobaha cunnooyinka lagu iibiyo ee degmada Järfälla:
- Dhibaatadu waxay tahay ayaan oran lahaa, in haddii wax la bilaabayo loo baahan yahay fahankooda, xeerarka ka deg-san. Waa inaan garawsado masuuliyadda i saaran. Haddii aqoon loo leeyahay intaa dhibaato iman meeyso:
- Ma waxaad marka ula jeeddaa inay jirto aqoon-darro.
- Haa, sida ay sheegtay.
Iyada oo ey kor u sii kacayaan maalinba maalinta ka dambeeysa tirada bulshada ku dhaqan nawaaxiga gobolka Istockholm, islamarkaana kor u sii kacayaan baahida loo qabo goobaha cunnooyinka, ayay degmada Järfälla oo ey ku dhaqan yihiin 58 000 oo ruux ey ka jiraan 370 goobood ee lagu maareeyo cuntada, degmadaasina oo ey ka howl-galaan oo keliya 3 kor-meere oo howshoodu tahay sidii ey uga war-heyn lahaayeen nadaafadda iyo maareeynta cunnada.
Tirada intaa le'eg ayaa u muuqan karta mid aad u badan, hase yeeshee aaney ahyn kuwo markiiba maskaxda ku soo dhacaya goobaha ey kor-meereyaashaasu ku howlan yihiin, kuwaasina oo ey ka mid yihiin qiyaastii 100 maqaayadood iyo goobaha lagu qaxweeyo, ahna goobaha maskaxda ku soo dhaca marka laga hadleyo maareeynta cunnada, sida ay sheegtay kor-meere Kristina Engström:
- Maareeynta cunnada ee goobaha waayeelka lagu xannaaneeyo, iibiyeyaasha miraha sida jorgubb-aha, iskuullada, xannaanooyinka dhallaanka, goobaha cunnada lagu sameeyo, laga soo saaro ama laga waarido. Goobaha aaney dadka badankii arag ama la kulmin, sida ay sheegtay.
Haddaba caqabadaha la soo gudboonaada ayey noo sheegeen kor-meereyaashu iney ka mid yihiin tirada kor u kaceeysa ee goobahaasi oo sannadkii 10 gaareya iyo is-bedellada mulkiileyaasha oo iyaguna gaara 60 illaa iyo 80 sannadkii. Hase yeeshee ey waayadan dambe dhaqaale-darrada caalamka ka jirta oo kor u qaadey tirada dadyoowga shaqa la'aantu ku habsatey, sidaadaraadeedna ey qaar badan oo asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa ama horay uga soo shaqeeyn jirey xirfado kale ey bilaabeen sidii ey camal middaa uga dhigan lahaayeen. Qaarkood iyaga oo aan wax aqoon ah u laheyn, qaarkoodna eyba adag tahay sidii ey ku akhrisan ama fahmiba lahaayeen xeerarka nadaafadda iyo maareeynta cunnada ka deg-san, sida ay noo sheegtay Giovanna Sanchez:
- Waxaan dareeney iney faracyadan/laamahan ku soo biireen dadyoow ka soo jeeda xirfado kale iyo ajaaniib oo aan wax waayo-arag-nimo ah u laheyn hoowlahan.
Dhanka kale ayey sheegeen kor-meereyaashu iney jiraan dhibaatooyin dhanka luuqadda oo uu fahankuba adag yahay. Iyadoona mar haddii luuqaddiiba adag tahay ey sii adkaaneeyso sidii lagu fahmi lahaa luuqadda uu ku qoran yahay xeerku, sida ay sheegtay Kristina Engström:
- Luuqaddu maahan oo keliya wax lagu wada xiriiro ee waa qalab kuu suurta-gelinaya inaad ku daalacato xeerarka ka deg-san hoowlaha la xiriira maareeynta cunnada. Lagu akhristo sidii lagu ogaan lahaa masuuliyadda ku saaran, la isugu war-gelin lahaa:
- Iyada oo sideedaba ay adag tahay sidii lagu fahmi lahaa luuqadda xeerarku ku qoran yihiin ayey aad u sii adkaanaysaa, haddii aan luuqadda hab-sami loo aqoon, sida ay sheegtay Kristina Engström.
Makhaayadleyda ayaan ka sineyn aqoon-darrada xeerarka iyo masuuliyadda saaran, iyadoona makhaayadaha soomaalida qaarkood oo aanu shalay lugta soo mariney ka ogaaney in aaney aqoon sidaa u ballaaran u lahayn xeerarka, hase yeeshee diyaar u yihiin haddii ey jiraan aqoon-kororsiyo iyo iney shaqaalahooda u diraan. Halka Jawaahir Shanle oo dhowaantan maqaayad ka furtay magaalada Malmö noo sheegtay iney tababar u soo martay hadday noqon lahayd dhanka xisaabaadka qidmadaha iyo canshuuraha dahsoon iyo weliba dhanka xeerarka khuseeya nadaafadda:
Kormeere Giovanna Sanchez, oo ka howl-gasha degmada Järfälla ayaa sheegtay iney jiraan koorasyo wanaag-san ee laga baran karo xeerarka iyo masuuliyadda eyna wacan tahay in halkaa laga bilaabo iyo sidoo kale iney suurtagal tahay, jiraanna dadyoow iskood uga akhrista macluumaadka aaladda internetka. Waana halka ugu wanaag-san ee laga bilaabi karo. Middaa ayaan kula talinnaa kulana talin lahyn, sida ay hadalka u dhigtay.
Ma la kulantaa goobo aan ku habooneyn maareeynta cunnada?